DRUGS REGISTRATION BULLETIN (June-2020) - Food and Drug Administration, Myanmar
DRUGS REGISTRATION BULLETIN (June-2020)
August 11, 2020 August 17, 2020 admin
အများပြည်သူများအနေဖြင့် ရောဂါဝေဒနာခံစားရာတွင်လည်းကောင်း၊ ရောဂါကာကွယ်ရာ တွင်လည်းကောင်း၊ အရည်အသွေးစစ်မှန်ကောင်းမွန်ပြီး၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း၍ အာနိသင် ရှိသည့်ဆေးဝါးများကိုမှီဝဲမှသာ ရောဂါဝေဒနာပျောက်ကင်းခြင်းနှင့် ကာကွယ်ခြင်းများရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အများပြည်သူများအနေဖြင့် ဆေးဝါးများမှီဝဲရာတွင်လည်းကောင်း၊ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ဆေးဝယ်ယူရာတွင်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင် ရရှိထားပြီး ဆေးဝါးရောင်းချခွင့်လိုင်စင်ရရှိထားသည့် ဆေးဆိုင်များမှဆေးဝါးများကို လည်းကောင်း၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအကြံပြုချက်ဖြင့်လည်းကောင်း စနစ်တကျသုံးစွဲရန် လိုအပ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်ရရှိထားသော ဆေးဝါးများတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၇/၉၃အရ ဆေးဘူးခွံ/ ဆေးပုလင်းတွင် ရိုက်နှိပ်ရမည့် အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အချက်အလက်များ ပါဝင်ရမည့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်အမှတ် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်အမှတ်ကို ဆေးဘူး/ ဆေးပုလင်းပေါ်တွင် စီစစ်ရန် – ဥပမာအနေဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
“ဥပမာ” MM Reg.No ၏ နောက်တွင် ရှေ့ဆုံးနံပါတ်ဂဏန်း ၄လုံး-အလယ်တွင် A (သို့မဟုတ်) AA (သို့မဟုတ်) L နှင့် နောက်နံပါတ်ဂဏန်းများမှာ မှတ်ပုံတင်အမှတ်စဉ်နံပါတ်များသာ ဆိုလိုပါသည်။
ဥပမာ- Reg. No. – 2411AA5108, 2411AA5058, 2505L682, R-သက်တမ်းတိုးထားပြီး၊ R2304AA5508 အများပြည်သူများအနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဆရာဝန်၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် လည်းကောင်း၊ မိမိသုံးစွဲသည့်ဆေးဝါးများ အာနိသင်မရှိ၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါက အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနသို့ သတင်းပေးပို့ရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။
The validity of registration of drug should be always monitored by concerned regulatory and enforcement officials. Application for renewal of registration submitted 90 days before the expired date of registration is highly appreciated. Failure to comply to this requirement may result in unwanted delays and unnecessary administrative actions.
From the registration number, one can clearly make of the validity of the registration i.e: the expiry date of registration.
For example: in Registration No. 2411AA5240
The first two digits show the year and second two digits show the month of expiry and two alphabets ie. AA and last numbers indicate the serial number.
i.e: Expiry date of Registration in Year 2024, Month-November and the Serial Number of Registration is AA5240
1. Section I : Registered Imported Drugs
1.a Prescription Only Medicines 1
1.b Over the Counter Medicines 73
2. Section II : Local Drugs
2.a Registered Local Drugs 86
2.b Renewed Registered Local Drugs 93
3. Section III : Controlled Medicines 95
4. Section IV : Renewed Registered Imported Drugs 96
Download [273.85 KB]
← မြန်မာနိုင်ငံ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (၂/၂၀၂၀) အစည်းအဝေးသို့ ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် တက်ရောက်ခြင်း
တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန သုတေသနဓာတ်ခွဲခန်း(နေပြည်တော်) သို့ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သွားရောက် ကြည့်ရှစစ်ဆေးခြင်း →
(၇-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ယူနိုင်သော ဆေးပစ္စည်းတင်သွင်းခွင့်မှတ်တမ်းတင် လက်မှတ်များ
(၂၉-၇-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ယူနိုင်သော ဆေးပစ္စည်းတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက် လက်မှတ်များ
(၂၄-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ယူနိုင်သော အလှကုန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်(သက်တမ်းတိုး)များ